Martingale ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ Binary Options ကို | Martingale ငွေစီမံခန့်ခွဲမှု
ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကအကောင်းဆုံး bargain သို့မဟုတ်အမြတ်အောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့လုပ်တိုင်းငွေကြေးဆိုင်ရာငွေပေးငွေယူအချို့သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလိုအပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်, ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်မဟာဗျူဟာကျတိုင်းတာတစျခုရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ထိန်းချုပ်ထားအသုံးစရိတ်နှင့်အသိပညာနှင့်အတူအချို့သောတိကျတဲ့အစီအစဉ်များလိုအပ်သည်။ ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုတစ်အမြတ်အစွန်းကုန်သွယ်များအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဆုံးရှုံးမှုအပေါ်ဖြတ်တောက်နေစဉ်အမြတ်တိုးမြှင့်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ချက်။
အဆိုပါ Martingale ဘုံသဘောမျိုး defies တဲ့ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစားဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်သင့်ရဲ့ရှယ်ယာလျှော့ချ၏, Martingale ပိုင်းတွင်မြှုတ်ပျောက် recover မှသကဲ့သို့သင်လောင်းကြေးကိုတိုးမြှင့်သင့်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ သငျသညျဆုံးရှုံးလျှင် Martingale အဆိုအရ, သင်ကမျိုးစုံကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနေရာသငျ့သညျ။ သင်တစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်ရန်ပေးသောအပြီးအနိုင်ရသည်အထိဤလုပ်ငန်းစဉ်များကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ဘယ်လို Martingale အလုပ်လုပ်တယ်: 'ဆုံးနည်းလမ်းအပြစ်လွှတ်' '
အဆိုပါမာရသွန် v / s ကိုပု Sprint စိတ်ပိုင်း
ကိုယ့်ပါ။ ) သံသရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အချိန်ကိုယူ
ကိုယ်။ ) သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု base ထိုနေ့၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ် partitioner
အဆိုပါ Martingale မဟာဗျူဟာ: အန္တရာယ်
Martingale အဆိုအရ, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းကြောင့်အလားတူဖြစ်ကြောင်း, အနိုင်ရတဲ့သို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ 50 / 50 ဖြစ်ပါတယ်။ ဤနည်းဗျူဟာအထူးသဖြင့် Blackjack သို့မဟုတ်ကစားတဲ့အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်နှင့်တကွ, ဆုံးရှုံးမှုများလွန်းမြင့်မားဖြစ်စေခြင်းငှါ, သို့သော်သူကအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကိစ္စဖြစ်ပြီးမှန်ကန်စွာပြုသောအမှုရှိသောအခါကအောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ရုံလောင်းကစားလိုပဲဥပမာအားကစားတဲ့အဘို့, အနီရောင်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ဖြစ်စေရတဲ့၏တန်းတူဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျကိုစဉ်ဆက်မပြတ်မဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ သင်မျိုးစုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အခွခေံ, အနိုင်ရပါကသင်သည်အရင်ကလုပ်ရှိသမျှကိုဆုံးရှုံးမှုများအတွက်မှတ်နှင့်အချို့အမြတ်အစွန်းစေကြပါလိမ့်မယ်။
သို့သော် Martingale ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာအန္တရာယ်များသို့မဟုတ်ထိရောက်သောပါသလဲ ကကုန်သွယ်မှကြွလာသောအခါကျနော်တို့က၎င်း၏အကောင်းအဆိုး cons အဖြစ်ယင်း၏ကျတှေ့မှာကြည့်သွားကြသည်။ ဤနည်းဗျူဟာသည်သင်၏ရှုမွငျခပေါ် မူတည်. ကောင်းမကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Martingale ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာဟာမာရသွန်နှင့်မ Sprint ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သငျသညျလောင်းကစားဝိုင်းတစ်ပုံစံအဖြစ်ကုန်သွယ်ရှုမြင်လျှင်တဦးတည်းအဘို့, ရေရှည်မှာအနိုင်ရတဲ့၏အခွင့်အလမ်းရှိပေလိမ့်မည်။ အနိုင်ရရိုက်ချက်ထောင့်လှည့်ပတ်ကြောင်းကိုစိတ်တွင်စေ့စေ့စပ်စပ်, သငျသညျဒုတိယအတှေးစရာမလိုဘဲမဟာဗျူဟာအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာဆုံးရှုံးတစ်ခုသာအနိုင်ရတဦးကိုပစ်ခတ်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဆုံးရှုံးမှု recover နိုင်ပြီးလာမယ့်တဦးတည်းအပေါ်အချို့သောအမြတ်ဝင်ငွေဆိုလိုသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာမြင့်မားခြင်း, ပြန်မြင့်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်တစ်လောင်းကစားသမားရဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘဲရှုံးနိမ့ကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုမှဦးဆောင်အလုအယက်ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါစိုးရိမ်စိတ်ဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဤနည်းဗျူဟာအတွက်အစွမ်းကုန်ကတိကဝတ်များနှင့်အာရုံလိုအပ်သည်။ ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြောက်ရွံ့သောသဘောမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချသို့မဟုတ်သင်အချို့သောဆုံးရှုံးမှုမြှုတ်ကြပြီးနောက်ဆုတ်ခွာသို့သင့်ရဲ့တရားသဖြင့်စီရင်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြည်သူ့အများအားဖြင့်ချက်ချင်းရလဒ်တွေကိုမပိုကြီးရုပ်ပုံအားဖြင့်လှုံ့ဆော်နေကြသည်ဆန့်ကျင်အဖြစ်ထို့ကြောင့်တစ်ဦးငယ်ကိုအနိုင်ပေးအဘို့အသွားစေခြင်းငှါ,
သငျသညျပြန်ဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် profit margin ဆိုတာကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ။
သူကပြောပါတယ်, ထိရောက်သောပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာ၏ရည်ရွယ်ချက်အနိုင်ရအရောင်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အဆုံးရှုံးမှု minimize ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်အကောင်းအဆိုး cons အပေါ်တှေ့ဖို့ကျနော်တို့ကထိရောက်သောသို့မဟုတ်မရှိမရှိကြည့်ဖို့သွားနေကြပါတယ်။
Martingale မဟာဗျူဟာ: ထိရောက်သော
အလုပ်မလုပ်ဖို့ Martingale ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာ, သင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်နှင့်ပိုမိုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖို့သင်၏အချိန်ကိုယူသင့်ပါတယ်။ မြေတပြင်လုံးစနစ်၏မဲနှိုက်-Down ကန့်သတ်အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျ Martingale မဟာဗျူဟာလျှောက်ထားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုအောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုမှပြိုပျက်နိုင်ပါတယ်။
အတူစတင်, ဒီမဟာဗျူဟာကိုဘေးဖယ်ပိုက်ဆံတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်တလိုအပ်သည်။ သူကပြောပါတယ်, သင်ပထမဦးဆုံးကနဦးသံသရာများအတွက်ပိုက်ဆံတစ်အချို့ငွေပမာဏကိုဘေးဖယ်ထားသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါခွဲဝေငွေပမာဏပေါ် မူတည်. အသေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအောင် setting ခြင်းဖြင့်အစပြုပါ။ ဤငွေပမာဏကိုသင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ရည်ရွယ်စုစုပေါင်းငွေအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သင့်သည်။
သင်ဟာဥပမာကွဲပြားခြားနားသောအိတ်ကပ်ထဲသို့ဝေမျှဝေယူကြောင်းပြောကြပါစို့။ ပထမဦးဆုံးအအိတ်ကပ်ဒုတိယတစျခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းဖြစ်သင့်သည်။ သငျသညျအသီးအသီးသံသရာ၏လမ်းကြောင်းသစ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အတွက်ပထမဆုံးအိတ်ကပ်၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဒုတိယအိတ်ကပ်ထဲသို့ get အခြိနျဖြင့်, သင်သည်ဦးတည်ချက်စျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအသိပညာရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်မတူဘဲ, ဒီအတူတူသင်စျေးကွက်နှင့်ပိုမိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူမြင့်မားတဲ့လောင်းကြေးကြောင့်ပိုမိုမြင့်မားပြန်ရပါလိမ့်မယ်။
အပြည့်အဝစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလို့ငှာ, သငျသညျနံနကျအခြိနျ, မွန်းလွဲပိုင်းနှင့်ညနေပိုင်းအဘို့, အဲဒီဖြစ်ပါသည်, သုံးကြိမ်မြောက်အောင်သင့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Martingale မဟာဗျူဟာအပေါ်အခွခေံ, သင်နံနက်စျေးကွက်အတွက်ပိုက်ဆံအချို့ကိုသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုခွဲဝေချထားပေးရန်သငျ့သညျ။ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစျေးကွက်စမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယအ, နံနက်လမ်းကြောင်းသစ်မှတ်ချက်ချတော်မူပြီးမှ, သင်ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အချိန်ကိုကြွလာသောအခါမွန်းလွဲကုန်သွယ်မှုများအတွက်ခွဲဝေငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပေါင်းလဒ်တစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်အကွာအဝေးမှာကနဦးငွေပမာဏကြောင့်အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားစေနိုင်ပါတယ်။ ကိုသတိရပါ, သင်ရှေ့ဆက်နောက်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအတည်ပြုကြသည်။
နောက်ဆုံးစျေးကွက်၏ညှနျကွားခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရှိခြင်း, သင်ညနေပိုင်းတွင်၏စျေးကွက်အပေါ်နောက်ဆုံးအဘို့ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှအမြတ်ခံရသကဲ့သို့ပြီးခဲ့သည့်ဈေးကွက်မှာအရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏကိုပိုမိုမြင့်မားဖြစ်သင့်သည်။ သင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစျေးကွက်၏ပိုကောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒီအဆင့်မှာအနိုင်ရများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။
အဆိုပါ Martingale မဟာဗျူဟာအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပိုက်ဆံတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းပေါင်းလဒ်ခွဲဝေချထားပေးရန်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ ဒီထက်ပိုက်ဆံရှိခြင်းသင်ရှုံးတဲ့စီးရီးခဲ့ကြယူဆအနိုင်ရကုန်သွယ်မှုအတွက်လုံလောက်သော reserved ကြမည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကုန်သွယ်မှုနဲ့မျှော်လင့်အနိုင်ရကုန်သွယ်ရေးမှရလိမ့်မည်မဟုတ်တော့အဆိုပါပိုကြီးတဲ့ငွေပမာဏ။
ထို့အပြင်ပုံစံဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူစတင်လိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မရှိပါ။ သငျသညျအကောင်းကံနှင့်အတူကုန်သွယ်ရေးကိုစတင်နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာအနိုင်ရလိမ့်မယ်သင် Martingale မဟာဗျူဟာ၏အဆရှုထောင့်လျှောက်ထားယူဆဆုံးရှုံးစတင်တစ်ချိန်ကသို့သော်ပြန်ကုန်ခမ်းလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတွင်မဲနှိုက်-Down ကန့်သတ်သောသူတို့၏အန္တရာယ်များကိုသင်တို့နှင့်အတူအဖွင့်အမီလိုက်တခါ, တကကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုဖြစ်လိမ့်မည်, သို့သော်, ဆုံးရှုံးသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကို minimize ပါလိမ့်မယ်။ ကြာကြာသင်အစွန်းရောက်အလေးသာနေဖြင့်ငွေရေးကြေးရေးအထွက်သုတ်ခံရများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင့်, ဒီထုံးစံ၌ရောင်းဝယ်ဖောက်။ ကုန်သွယ်ရေးတိုးမြှင့်အဆ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုံးရှုံးသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအောင်မြင်တော်မူပြီးမှမပါဘဲကုန်သွယ်မှထွက်ရန်သငျသညျအတင်းအကျပ်, ကပ်ဘေးဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် Martingale ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာ အန္တရာယ်များသို့မဟုတ်ထိရောက်သော? ကျနော့်အမြင်မှာ, ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်အတိုငျးပွုပါသည်။ အဆိုပါ Martingale ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းဗျူဟာအတွက်ထိရောက်သောသက်သေပြခဲ့သည် ထို binary options များ။ ထို့ကြောင့်, အရံအတွက်ကတိကဝတ်များနှင့်လုံလောက်သောငွေနှင့်, ကကုန်သွယ်ရာမှပိုမိုမြင့်မားပြန်အသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါလှည့်ကွက်ပုံစံကိုစောင့်ရှောက်မည်နှင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိစိတျထဲတှငျ martingale ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဆောင်သောကိုယ်ငွေခွဲဝေချထားပေးရန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Tags: binary options များအဘို့အကောင်းဆုံး martingale နည်းဗျူဟာ, binary options များ martingale, binary options များ martingale နှင့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဂဏန်းတွက်စက်, binary options များ martingale အဆင့်ဆင့်, binary options များ method ကိုပြန်လည်သုံးသပ် martingale, binary options များ martingale နည်းဗျူဟာ, binary options များ martingale reverse, martingale စနစ်ကအနိုင်ရ binary options များ, binary options များအတွက် martingale စနစ်ကအလုပ်မ, martingale ဂဏန်းတွက်စက် binary options များ, binary options များအတွက် martingale, martingale မဟာဗျူဟာ binary options များ, binary options များအတွက် martingale နည်းဗျူဟာ, martingale စနစ်က binary options များ, binary options များအဘို့ martingale စနစ်က, martingale ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ binary options များ